Apple Watch Series 7 inopa isina waya kufambisa data pa60,5 GHz asi haina kuvhurika | IPhone nhau
Ichi ndicho chimwe chezvinhu zvakawedzerwa muApple Watch Series 7 uye izvo zvakaburitswa mugwaro reCCC. Nhau dzinouya kubva muruoko rwe MacRumors inoratidza kuti iyo Series 7 inopa 60,5 GHz dhata yekuchinjisa sarudzo.iyi sarudzo haina kuvhurika kune vese vashandisi. kushandiswa kwakasarudzika kwevashandi veApple.
Iyi yekubatanidza inopa 60,5 GHz transmitter inoda "wireless serial dock" patented neApple ine USB C yekubatanidza iyo chete Apple vashandi vanoita sevanofanirwa kutumira data ku smartwatch. Mupfungwa iyi, hapana akawanda akawandisa mashandiro ekushambadzira kweiyi data kunyangwe chiri chokwadi kuti hatizokwanise kuzvishandisa futi.
Icho chigadziko chinotendera kuchinjiswa kwedata kubva kuApple Watch Series 7
Kuchenesa kunoratidza chigadziko chine serial nhamba A2687 uye sezvatakambotaura pakutanga zvinoshanda ne USB-C port. Kubatana pakati pechigadziko newachi pachayo kunoitwa nemagineti senge mabheji ekuchaja eApple Watch.
Iyo EUT ine chishandiso cheApple Watch chakabata ruoko chine rezinesi-yemahara / rezinesi-isingabhadharwe 60,5 GHz dhata yekutaurirana yedhata. Yakatemwa serial isina waya base ine inoenderana 60,5 GHz module inodikanwa kubvumidza kutenderera pane Apple Watch. Chishandiso chemagineti chinokiya Apple Watch panzvimbo panzvimbo pamusoro peiyo serial waya isina waya, ichibvumira kutaurirana pakati pebhesi neApple Watch. Iyo isina waya serial base inogoneswa ne USB-C chiteshi.
Gwaro rakaburitswa uye rikaburitswa nenhepfenyuro kubva pakupera kwaNyamavhuvhu uyes vaongorori veBarclays Blayne Curtis naTom O'Malley, ndivo vakaburitsa data. Nechigadziko ichi, sekutsanangurwa pakati, iko kubatana kunoita kuti data riendeswe kusvika pa480 Mbps, iyo yakafanana nekumhanyisa kweUSB 2.0. Zvinogona kuti Apple inoda kuwana ruzivo rwechigadzirwa pasina kushandisa chiteshi icho chiri mukati megomba remabhande, neizvi zvingave nyore kuwana wachi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple Watch Series 7 inopa 60,5 GHz isina waya kufambisa data asi haina kuvhurika
Apple Inoburitsa Yekutanga Trailer yeInvasion Series